प्रचण्डको वडीगार्ड बनेकी क्रान्तिको यस्तो दयनिय अवस्था : पार्टीले ‘मलाई ५ लाखमा बेच्यो, परिवार रिसाएर मेरो किरिया नै गर्यो’ (भिडियो हेर्नुस्) – Wow Sansar
January 2, 2021 150
काठमाडौ । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बडीगार्ड समेत बनेकी महिला क्रान्ति अहिलेको राजनीतिक अवस्था देखि निकै दुखी छन् । भारतवाट नेपाल वार्ताका लागि प्रचण्ड आउँदा उनी घोडामा हिड्दा आफुहरु पैदल हिडेर उनीहरुको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् ।
उनी १२ वर्षको उमेरमै माओवादी खोज्दै गएर सामेल भएकी थिइन् । तत्कालिन नेकपा माओवादीको पर्चा पढेपछि उनी माओवादी प्रति आकर्षित भएकी थिइन् । उनको वास्तविक नाम बालिका बुढाथोकी हो । पार्टीमा उनको नाम क्रान्ति राखिदिइन् । नेपाली सेनाले आफ्नो वुवाको ज्या न लि एपछि उनी माओवादीमा गएकी थिइन् ।
१२ वर्षको उमेरमा माओवादी बन्न जाँदा उनीसंगै १८ जना साथी पनि थिए । माओवादीले नै परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हामीलाई लागेर हामी माओवादी खोज्दै गएको बताउँछिन् । एक दिन पुरै पैदल हिडेर गएपछि उनले माओवादीका नेता भेटेकी थिइन् । त्यसपछि उनी माओवादीको महिला संगठनमा रहेर काम गरिन् । उनले बुवाको ब न्दु क लिएर माओवादीमा गएकी थिइन् ।
त्यसैको आडमा उनले तालिम गरिन् । प्रहरी चौकीमा क ब्जा गर्न पनि उनी गइन् । प्रहरीले आफ्नै अगाडी साथीहरु ढ ले को पनि उनले देखेकी छन् । तर अहिले भने उनी उनै नेता प्रति निकै निरास भएकी छन् । आफुले सुरक्षा दिएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । उनीहरुको जिवनस्तर फेरीयो । तर क्रान्तिको जिवन भन्दा पहिला भन्दा पनि तल पुग्यो । पहिला बुवा गाउँको अगुवा थिए, गाउँमा राम्रै पहिचान थियो । तर अहिले वुवा पनि छैनन् ।
उनीहरुको आफ्नो पहिचान पनि छैन । पार्टीकै लागि यस्तो त्याग गरेका हामी आज टुहुरा भयौं, ५ लाखमा पार्टीले हामीलाई बेचिदियो । मैले नै सुरक्षा दिएका नेताहरुको जिवनशैली देखेर अचम्म लाग्छ । हामी भने दुई छाककै लागि अझै संघर्ष गरीरहेका छौं ।
Prevअनिताको सबै भन्दा जोखिम अप्रेशन हुदै, यदि अप्रेसन सफल नभए पाएप बाटै जीवनभर सास फेर्नु पर्ने (भिडियो)
Nextमलेसियावाट ज्वाइँले पठाइदिएको पैसाले ससुरालीले नयाँ घर बनाए, त्यसपछि छोरीको फेरी अर्कैसंग विवाह गरिदिए (भिडियो हेर्नुस्)
देशलाई प्रचण्डमुक्त नगरिए ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ : प्रभु साह
रिचार्ज कार्डमा मनपरी मूल्य, भएन नियमन
कक्षा १२ काे नतिजा प्रकाशन हुने भन्दै NEB बाट एकाविहानै आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना ! जान्नुहोस् ;
रुपन्देहीमा जिपले दुई वटा मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु , २ घाइते
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6781)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3907)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3368)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1364)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1143)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1098)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1067)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1039)
एक जोडीले लिएका थिए होटलमा कोठा, लामो समयसम्म बाहिर निस्किएनन्, कोठामा जाँदा कर्मचारीहरु चकित (702)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (697)
नेपाल आʼर्मीका यी चेलीहरुको रमाइलो टिक-टक भयो भाइʼरल (भिʼडियो सहित)
ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि यसरी भर्नुहोस् फर्म
भाइ;रल सचिन परियार र रचना रिमालको आवाजमा पहिलो गित यस्तो… उक्त गितको सुटिङ्गमा भयो असाध्यै रमाʼइलो (हेर्नुʼहोस् भि’डियो)